Iziphi izifo isibindi ezikhiqiza kuzo i-cholesterol eningi? > Ukuxilonga
Kungani futhi ngaphansi kwesifo yisiphi isibindi sikhiqiza i-cholesterol eningi?
Umzimba womuntu uhlelo oluhle, olwasungulwa ngokwemvelo, lapho kungekho lutho oluhle khona. Zonke izinto ezenziwe ngezitho zangaphakathi zenza imisebenzi yazo ethile, futhi ama-metabolites asetshenzisiwe ayakhululwa lapho akha. Umuntu uy uhlelo olulinganiselayo. Ngakho-ke kungani isibindi sikhiqiza i-cholesterol eningi embi? Noma mhlawumbe akuyona yonke into embi kangako?
Indima ye-cholesterol emzimbeni
I-cholesterol iyisakhi esibalulekile sezitho zamangqamuzana. Lezi zokugcina, njengamapaneli wesamentshisi, ziqukethe ungqimba lwangaphakathi nolwangaphandle lwe-phospho- kanye nama-glycolipids kanye nolwelwesi olucwengekile phakathi kwawo. I-cholesterol imaphakathi nje, idlala indima yomsunguli, istabilizer of elasticity kanye nohlobo lokuhlunga oluvimba ukuhamba kwamahhala kwamamolekyuli kuseli eyodwa kuya kwesinye.
Njengoba wonke amangqamuzana omzimba enama-membrane awo e-cytoplasmic, i-cholesterol ikhona kuzo zonke izicubu. Ibanikeza ukwakheka nobunzima phezu kobubanzi bokushisa obubanzi. Futhi kuyadingeka:
ukwakheka kwama-hormone wezindlala ze-adrenal, izindlala zocansi zabesifazane nabesilisa,
ukukhiqizwa kwama-asidi acid, anquma ukudla kube ngamakhemikhali wokugaya ukudla,
Ukuguqula i-proitamin D ibe uvithamini ophelele,
nokwenza ngcono ukumuncwa kwama-vithamini amaningi anyibilikisiwe.
Kukhiqizwa ikakhulukazi esibindini, yize ezinye izicubu (i-epithelium yezinso, amathumbu, izindlala ze-sebaceous) zibandakanyeka kule nqubo. Ngaphezu kwalokho, ingxenye ethile yayo ivela ngaphandle nokudla. I-cholesterol ye-Exo native evela emgodini wokugaya ukudla nayo ingena kuqala esibindini. Yilapho ukuxhumana kwayo namaprotheni kwenzeka khona ngokwakhiwa kwama-lipoprotein, abese asatshalaliswa ngumjelo wegazi endaweni yokufunwa futhi ahlanganyele ekuphendukeni okuhlukahlukene kwe-biochemical.
Umehluko phakathi kwe-lipoproteins usebangeni elilinganisayo le-cholesterol kumaprotheni. Uma kuneprotein eningi, osayizi be-lipoprotein bakhulu impela, kanti nobukhulu obuphezulu buphakeme. Uma incane ingxenye yamaprotheni, yehlisa ubungako benkimbinkimbi yamaprotheni futhi yehlise nemingcele yomzimba. Kepha, noma ngabe yini, ekugcineni ama-lipoproteins ayabhidlizwa, futhi imikhiqizo yokuqhekeka idonswa ngamathumbu, ngokwezinga elincane - ngezinso nangesikhumba.
Ngokukhishwa ngokweqile kwama-lipoprotein aqukethe i-cholesterol esuka esibindini kuya egazini kanye / noma ukususwa okunesici kwemikhiqizo yawo yokubola, kuba khona isimo se-hyperlipidemia. Bekungeke kube yingozi enkulu uma izindonga zangaphakathi zemithambo zingonakalanga ubuthi noma ushintsho ekucindezelweni kwegazi. Futhi ngobudala, ingozi yokuthola lomonakalo onjalo, okusho isifo senhliziyo, inyuka kakhulu. Lokhu kubangelwa izifo ezahlukahlukene, imikhuba emibi, ukubonakaliswa kwengcindezi.
Ama-lipoprotein angama-low has a usayizi ofanele ukuze asibambe ngokuqinile izikhala ezivelayo, okusho ukuthi azinalutho "olubi" emicabangweni yazo. Kodwa-ke, njengoba kungekho ukuzithiba! I-cholesterol ethe xaxa kuqala ifakwa "ngomusa" kulwelwesi lwamaseli we-vascular lining. Kepha bese iqongelela ngokungalawuleki kubo, ibabhubhise, futhi isivele ingaphezu kwe-endothelium - ekuqineni kodonga olungaphandle. Ngakho-ke kwakhiwa ama-plaque e-atherosclerotic, anciphisa ukukhanywa kwemithambo yegazi futhi angumugqa ophambili we-atherossteosis.
Ngakho-ke kuhlangana kanjani isibindi ne-cholesterol? Kungani i-hypercholesterolemia ivela? Futhi iyiphi i-pathology eholela ekuphazamisweni kwesihlungi somzimba esiyinhloko?
Synthesis of cholesterol esibindini
I-cholesterol ekhiqizwa esibindini futhi isuka emathunjini aphezulu ibopha amaprotheni ngaphakathi kumaseli wesibindi. Le nqubo idlulela ekushintsheni kwe-chain engu-20, ukuze ungene imininingwane engasho lutho. Into esemqoka okufanele uyiqonde ukuthi kwakheka ama-lipoproteins asezingeni eliphansi kakhulu (ane-cholesterol eningi namaprotheni amancane). Bese kuthi futhi esibindini, ngaphansi kwethonya lama-enzymes akhethekile, amanye ama-acid anamafutha ahlukanisiwe, kanti isilinganiso kumakhompiyutha aqukethe amafutha asuka ngandlela thile ebhekise kwiprotein: i-lipoproteins ephansi iyatholakala.
Angena egazini futhi ahanjiswa ngezicubu zomzimba. Amaseli angasebenzi athatha i-cholesterol futhi ayisebenzisela injongo yayo ebekiwe. Izinsalela zama-lipoprotein ancishisiwe anokuqukethwe kwe-cholesterol ephansi kanye nokugxila kwamaprotheni amaningi kususwa emangqamuzaneni kubuyela egazini. Babizwa ngokuthi ama-lipdrinsins aphezulu.
I-HDL ijikeleza egazini, iphinde ingene esibindini. Ingxenye yabo isebenza njengesisekelo sokuhlanganiswa kwama-bile acids enza i-bile. Ingena gallbladder futhi ifakwa lapho. Ngesikhathi sokudla, i-bile iphonswa emathunjini futhi ibandakanyeka ekugayweni. I-cholesterol engasetshenziswanga "iqediwe" ngama-microorganisms wamathumbu, futhi ama-metabolites aphumelelayo adalulwa ezindlebeni. Ingxenye yesibili iqala embuthanweni omusha we-lipid metabolism.
I-cholesterol yakhiwa esibindini ngaphansi kokulawulwa kokuxineka kwayo egazini: nge-hypercholesterolemia, ukwakheka kunciphisa, nge-hypocholesterolemia kuyashesha. Ama-hepatocytes anempilo ayakwazi ukugcina amazinga e-cholesterol ajwayelekile isikhathi eside, naphezu kwendlela yokuphila ye-atherogenic (ukudla amafutha amaningi ezilwane, ukubhema, utshwala, ukucindezela, ukungasebenzi ngokomzimba, ukukhuluphala).
Kepha kunomkhawulo kukho konke: ngokuqinisekile kuzofika isikhathi lapho isibindi singasakwazi ukulawula ngokwanele i-cholesterolemia. Ukuphazamiseka okunjalo komzimba emzimbeni kungabangelwa yizizathu ezine eziyinhloko:
Ukudla isikhathi eside nokungalawulwa kwe-cholesterol evela ngaphandle,
ukungabikho noma inani elanele lama-receptors amaselula athumba i-cholesterol egazini,
ukukhiqizwa okwandayo kwe-cholesterol yakho,
ukuzalanisa kwayo kungasebenzi.
Ukudla ngokweqile ekudleni, i-pathology yezitho ezibandakanyekile ekwakhekeni nasekusebenzeni kwe-cholesterol, ngokuqinisekile kuzoholela ekungalingani kwayo, bese kuba nezifo ze-metabolic. Okokuqala, ekuguqukeni kwezakhiwo ze-bileic, ezibangela ukwakheka kwamatshe emgodini, kanye nokwanda kwezinga le-LDL egazini, okubonakaliswa yi-atherosulinotic deposits ezindongeni zempi. Ekugcineni, konke kuzophela ngokuqalwa kwesifo esizimele: isifo se-gallstone kanye ne-atherossteosis.
Uma sigxila ekuhlelweni okukodwa kwe-lipoproteins eyodwa, kufanele sicabange ngokuningiliziwe ngohlelo "lwesibindi ne-cholesterol": ubudlelwano obuhlangene buthi balahlekelwe yiphi indlela?
Inkomba ejwayelekile ye-cholesterol ephelele isukela ku-3,6 kuye ku-5, 2 mmol / L. Konke okungaphandle komngcele ongenhla kubizwa ngokuthi yi-hypercholesterolemia. Ingozi yokuba nezifo ze-metabolic yanda nge-hypercholesterolemia ngenxa ye-low-density lipoprotein, edume ngokuthi "cholesterol" embi ".
Ngakho-ke, yiziphi izifo amaseli wesibindi okufanele akhiqize i-cholesterol "emibi" eminingi?
Ngokukhuphuka kwe-lipoproteins yegazi (ifa, inzalo equkethe ubuhlakani, umdlavuza we-pancreatic noma i-prostate, isifo sikashukela, ukukhulelwa, i-adrenal cortical hyperplasia, ukuhluleka kwezinso, nemithi ethile), isibindi siqhakambisa ngaphezu kwezinto eziqukethe i-cholesterol umsebenzi. Lapha akufanele asolwe nganoma yini.
Ukwanda kokuqukethwe kwama-lipoproteins aphansi kwabantu kubonwa nge-cholestasis. I-LDL iqala ukudabula ezindongeni ze-bile ducts ngemuva kokuqongelela isikhathi eside futhi ifingqa lezo esezisakazeke egazini. Izimo ezinjengalezi zikhula nge-cholelithiasis, ukuqhekeka kwama-ducts we-bile we-volretetric formations, ukucindezelwa kwe-intrahepatic bile ducts ngezicubu ezingaphandle ezikhula esibindini.
Nge-cirrhosis, i- cholesterol “embi” inyuka ngenxa ye-hypertrophy yamaseli wesibindi ezigabeni zokuqala zesifo. Kamuva, ziqhuma futhi zithathelwa indawo izicubu ezinama-fibrous. Ngakho-ke, ezigabeni zokugcina zenqubo, i- cholesterol “embi” ibuyela kwesejwayelekile, bese izinga layo lehla ngokuphelele. Emiphumeleni ye-pathology, i-cholesterol ephelele ingakhuphuka ngenxa ye-lipoprotein ephezulu, ngoba i-hepatocytes ayisakwazi ukuyicubungula.
Isimo esifanayo senzeka nge-hepatitis yanoma iyiphi i-etiology noma ukulimala kwesibindi, ngoba ukwehluleka kwesibindi kufinyelela naku-cholesterol synthesis. Amazinga okukhuphuka we-cholesterol ephelele ahlotshaniswa nokwanda kwenani lamazinga aphezulu we-lipoprotein angadliwanga yisibindi esigulayo.
Ungahlola kanjani isibindi
Kuyaqabukela, umuntu “ophuma kolwandle oluhlaza okwesibhakabhaka” uzohlola isimo sesibindi. Ukucindezela esenzweni kungaba ezinye zezimpawu zesibindi:
ukungaphatheki kahle noma usizi olubuthakathaka ku-hypochondrium efanele,
ukunwetshwa kwesibindi, okutholakale ngengozi ukuhlolwa kwe-ultrasound kwezitho zesisu noma ngokuzihlola,
okungathandeki, okuvama kakhulu, ukunambitheka emlonyeni,
ukuvela kokugqunywa kwe-icteric kwe-sclera noma isikhumba.
Okokuhlola kokuqala, kwenziwa i-biochemical analysis of plasma yegazi, ebizwa nangokuthi ukuhlolwa kwesibindi. Kubandakanya ukunqunywa kwenani lama-enzymes athile, inani nekhwalithi ye-bile pigment bilirubin kanye nenani eliphelele leproteyini ne-albhamuin ekhiqizwa yi-hepatocytes. Ukuze ubheke ukuthi ingakanani i-cholesterol eyenzelwe esibindini, iphrofayili ye-lipid yenziwa. Uma kunesidingo, angaya ezifundweni ezithile zesimo esisebenzayo sesitho. Imiphumela ihlolwe ngokuhambisana nokuhlolwa kwesithombe se-ultrasound sezicubu zesibindi.
Noma ngabe kunjani, izinkomba ezijwayelekile zesibindi azikhiphi ukuthuthukiswa kwe-hypercholesterolemia kwezinye izizathu. Yize lesi sitho esibalulekile futhi sidinga ukuvikeleka, njengawo wonke amanye.
I-cholesterol iyinto edingwa umzimba ukuze kuthuthukiswe kahle izicubu zamathambo, ukwakheka kwama-hormone, ukwakheka kwamavithamini, ukusebenza kohlelo lwezinzwa oluphakathi nokwakhiwa kwezilonda zamaseli.
Iningi lento likhiqizwa isibindi, futhi kuphela ingxenye encane eyakhiwe kwezinye izitho nezicubu. Emzimbeni womuntu osekhulile, kukhiqizwa cishe i-1 g yento ngosuku, esetshenziselwa ukwengeza i-bile, ukwakha amaseli, futhi nokuhlanganisa amakhemikhali ahlukahlukene amakhemikhali. Ngemuva kwalezi zinqubo, ama-lipid ngokweqile ayakhululwa, futhi ngenxa yalokho ibhalansi iyagcinwa phakathi kokudla nokusetshenziswa.
Kepha, lapho ukukhiqizeka kwesibindi kukhula, noma umuntu echitha amafutha amaningi, leli bhalansi liyaphazamiseka, bese ama-lipids asezingeni eliphansi eqala ukungena egazini, okuholela ezifweni zenhliziyo nezinye izinhlelo.
Isizathu sokuvezwa kwamafutha aphansi kakhulu kwabantu kungenzeka ukuthi sithatha imithi: ama-hormone e-steroid, izindlela zokuvimbela inzalo ngomlomo, ukugcotshwa kwezisu nokukhethwa okungafanele kwezidakamizwa zesifo sikashukela.
Ezinye izizathu zokwanda:
Ama-adrenal ne-thyroid dysfunctions.
Ukushoda kwe-chromium ne-Vitamin E emzimbeni.
Ukwehluleka kwangempela nokwenziwa kwesibindi.
Izici ezibangela ukwanda yilezi: ukusetshenziswa njalo kokudla okunamafutha, ukudla ngokweqile, impilo yokuhlala phansi, ukuba khona kwemikhuba emibi. Lababantu bavame ukuthuthukisa i-hepatosis enamafutha - isifo lapho amaseli wesibindi ethathelwa indawo yi-lipids.
Ngokuqhubeka kwesifo, i-hepatocytes egcwala amafutha iqala ukufuthelana - kukhula i-hepatitis enamafutha, noma i-steatohepatitis. Kulesi sigaba, amangqamuzana esibindi ayafa futhi aqale ukushintshwa yizicubu ezithintekayo, imisebenzi yezitho iyakhubazeka, okubangela ubunzima, ukuqina kwesibindi noma umdlavuza.
I-Cirrhosis yanoma imuphi umsuka cishe ihambisana njalo nokunyuka kwe-cholesterol. Lokhu kungenxa yokuthi isibindi asikwazi ukubhekana nokususwa kwama-lipids amaningi emzimbeni, kepha ngasikhathi sinye siyaqhubeka nokuhlanganisa lezi zinto. Ezigulini eziningi ezine-hepatic pathologies, ama-cholesterol amana aqala ukwakha, andisa inkambo yesifo.
Izindlela zokungena emzimbeni
Isibindi ne-cholesterol kuxhunyaniswa nokwakhiwa kwe-bile. Kuvela kumamolekyuli e-lipid akuma-ducts e-hepatic ukuthi ama-bile acid akhiwa, okuthi, ngemuva kokuhlanganiswa namaprotheni, ancishwe egazini.
Amafutha okweqile abuyiselwa esibindini, abolile, adalulwe emathunjini amancane futhi ashiya umzimba kanye nezindunduma. Ngama-pathologies e-hepatic, ukwakheka nokukhishwa kwe-bile kuyaphazamiseka, kwakheka isigaxa - konke lokhu kuholela ekwandeni kwe-cholesterol egazini nasezicutshini.
Izimpawu ze-lipid metabolism
I-dyslipidemia noma i-metabolism ye-lipid engasebenzi kahle ayithinti kuphela isibindi kuphela, kodwa futhi nezinye izicubu zomzimba futhi ibangela izinqubo ezahlukahlukene zesimo esibi noma esingamahlalakhona. Futhi njengoba zonke izinqubo zixhunyiwe emzimbeni, inkomba ye-cholesterol nayo ingathinta inani lamanye ama-lipids: triglycerides, fatty acids, phospholipids.
Ukwephulwa kokukhiqizwa kwama-lipids athile kuholela ekwandisweni kokunye kwezinye izinto, kepha ukungasebenzi kahle okuvame kakhulu kubhekwe njengokwanda kwezinga le-triglycerides ne-cholesterol emzimbeni.
Izimpawu eziphambili ze-dyslipidemia:
Ukwakheka kwama-xanthomas kanye ne-xanthelasma ebusweni besikhumba naphezu kwama-tendon.
Ukwanda kwesibindi nobubanzi.
Ukwephula i-lipid metabolism, kutholakala izibonakaliso zangaphakathi ezixhomeke ekweqileni nasekuntuleni kwe-lipids.
Izimpawu zamazinga aphezulu we-lipid:
Ukuthuthukiswa kwe-inhliziyo inhliziyo.
Ngezifo ezithile zofuzo, ukuphazamiseka kokugaya ukudla nokuzila ukudla okuhlala isikhathi eside, i-dyslipidimia iyakhula, ehlotshaniswa ne-lipids enganele.
Izimpawu zamazinga aphansi we-lipid:
Isikhumba esomile, ukuphuma kwezipikili.
Izinqubo zokuvuvukala esikhunjeni, i-eczema.
Ukungahambi kahle kokuya esikhathini.
Ukuntuleka kwe-lipids kuholela ekuphazanyisweni kokushintshana kwamavithamini ancibilikisa amafutha, ekuphazamiseni kwemizwa, ukungasebenzi kahle kwe-thyroid. Uma kutholakala isilinganiso se-lipid ephansi enganeni, khona-ke ukuthuthukiswa ngokomzimba nangokwengqondo kungathinteka.
Imvamisa, i-cholesterol ephakeme ayivezwanga yizimpawu ezibonakalayo, futhi ingatholakala kuphela kusetshenziswa ubuchwepheshe bokuxilonga abelebhu. Ukuvela kwezimpawu kubonisa ukuthi isikhathi eside umzimba uhlushwa imetabolism ye-lipid. Ukuxilongwa kwezinga layo, kanye nokunye ukuphazamiseka emzimbeni, kuqala ngomlando wezokwelapha kanye nokuhlolwa kwesiguli.
Okufakiwe ekuhlolweni kokuqala:
Ukufundwa komlando wezokwelapha wesiguli, ukukhonjwa kwama-pathologies amafa.
Ukuqoqwa kolwazi mayelana nendlela yokuphila: umsoco, imvamisa yokuphuza utshwala.
Ukuhlolwa: i-palpation ye-patity esiswini, ukuhlolwa kwesikhumba, ukuhlolwa kwesisindo somzimba, isilinganiso sokucindezela.
Ucwaningo: zibonakalaphi futhi nini izimpawu zokuqina kobunzima.
Ukuhlolwa okulula kakhulu okungabonisa ukuthi i-cholesterol iphakanyisiwe ukuhlolwa kwegazi okujwayelekile.Kepha ukuze uthole isithombe esejwayelekile sokwephulwa, kuyadingeka ukuthola izinga lawo wonke ama-lipids asebenzisa iphrofayili ye-lipid.
Imvamisa, i-cholesterol ephelele ayifanele idlule ku-5.3-5.4 mmol / L, ukukhuphuka okulinganiselayo ukuya ku-6 mmol / L kungenzeka, okuthe xaxa kukhombisa ubungozi bezinkinga - okuphezulu, kokukhulu amathuba okuba kwakhula i-pathologies ye-inhliziyo. Ukuhlaziywa kukuvumela ukuthi uthole inani lamafutha aphansi kanye nokuqina kokuqina, nama-lipids asezingeni eliphakeme awadlali indima ekhethekile, ngoba okunye okungcono. Kepha ukuhlushwa kwe-LDL akufanele kudlule ku-3.9 mmol / L.
Ukuze izivivinyo zikhombise umphumela ofanele, kufanele ulandele imithetho elandelayo:
Ngosuku olwandulela ukuhlolwa, ungafaki ukudla okuthosiwe, okunephunga nokunosawoti kakhulu.
Musa ukudla kakhulu ngosuku olwandulela ukuhlolwa.
Ungabhemi ekuseni kuze kube yilapho kudonswa igazi.
Ngosuku olulodwa ngaphambi kokuhlaziywa, zama ukukukhipha ukucindezelwa ngokomzimba nangokwengqondo.
Unganquma izinga le-cholesterol egazini usebenzisa izivivinyo ezikhethekile ezingathengwa ekhemisi. Kodwa izindlela ezinjalo aziqinisekisi i-100% yemiphumela. Izici ezahlukahlukene zingathonya izinkomba, isibonelo, izinga lokushisa kanye nomswakama. Ngakho-ke, ukuze kuhlolwe kahle izinga layo esegazini, kuyadingeka ukuthi uhlolwe ezindaweni zokucwaninga ezikhethekile.
Ungawukhulisa kanjani umkhiqizo?
Ukwehlisa i-cholesterol, udinga ukususa izinto ezibangele ukwephulwa okunjalo. Iziguli zidinga ukuqapha ukudla kwazo nesisindo, ziqinise ukusebenza komzimba, zinikeze utshwala. Lapho kukhona ama-hepatic pathologies, umuntu kufanele abonwe uchwepheshe futhi alandele izincomo zokwelashwa.
Izidakamizwa ezidume kakhulu ukunciphisa ama-statins. Isenzo sabo sihloselwe ukucindezela ukukhiqizwa kwe-enzyme ebandakanyeka ekwakhekeni kwama-lipoprotein aphansi.
Umshini wokusebenza kwama-statins
Futhi, izidakamizwa ezinjengalezi ziyakwazi ukuguqula ukuhlangana kwegazi ngokwejwayelekile, zinciphise ingcindezi emthanjeni we-portal, zivimbele ukwakheka kwezigaba zegazi nezigcwethi ze-atherosclerotic futhi zibe nomthelela omncane wokulwa nokuvuvukala. Sekufakazelwe ukuthi ama-statins anganciphisa ubungozi bokuthola i-cirrhosis kanye nama-tumor anomdlavuza ku-hepatitis yegciwane.
Kunezizukulwane eziningana zezidakamizwa kuleli qembu, kodwa ochwepheshe abanolwazi banquma ama-statins aphephe kakhulu kwesibindi, izidakamizwa: Simvastatin, Lovastatin, Fluvastatin, Rosuvastatin, Atorvastatin.
Ama-sequence we-Bile acid enza i-bile, okwenza amanye awo angasebenzi. Ngenxa yalesi senzo, isibindi sisebenzisa i-cholesterol eyengeziwe ukwenza ukuntuleka kwama-acid. Izidakamizwa ezinje zifaka phakathi: Colestipol, Cholestyramine, Kolesevelam. Izikhathi ezihlukaniswe ngama-bile acid zinqunywa kaningi, ngoba empeleni azinamphumela omubi emzimbeni.
Ama-Bile Acid Sequestrants
Ama-fibrate nawo ahlotshaniswa nama-bile acid - isenzo sawo sihlose ukunciphisa ukukhiqizwa kwe-cholesterol ne-triglycerides yesibindi. Isenzo semishanguzo kuhloswe ngaso ukuvuselela umsebenzi wama-enzyme adiliza indawo ephansi kwabantu kanye nama-lipids aphansi kakhulu. Ihlunga kahle ngokwejwayelekile yenza ukwakheka kwegazi, ngakho-ke kunqunyelwe i-atherosclerosis neziguli ezingasizwa ekudleni nasekwelashweni nangezinye izindlela. Amafiga afaka: gemfibrozil, fenofibrat, bezafibrat.
AmaHepatoprotectors anqunyelwa ukuthi alondoloze ukusebenza okujwayelekile kwesibindi futhi asuse namafutha athe xaxa amangqamuzana aphansi. Zinqunyelwe kuphela njengengxenye yokwelapha okuyinkimbinkimbi neziguli ezine-hepatic pathologies. Okusebenzayo kakhulu: Okubalulekile, i-Ursosan, i-Essliver, iHeptor, iHeptral. Umphumela we-hepatoprotective osebenzayo utholakala ngamalungiselelo asuselwa ku-artichoke nethanga lembewu yethanga.
Ezinye izidakamizwa zokunciphisa ukwakheka kwazo:
I-Omega 3, i-Omacor, i-Fish fish - yenyusa izinga le-cholesterol "enhle", isekele ukusebenza kwemithambo yegazi.
I-Lipoic acid - ivuselela isibindi, iguqule i-carbohydrate kanye ne-fat metabolism.
Amavithamini B12, B6, B9, i-nicotinic acid - anciphisa izinga lezinto ezisegazini.
Kunezidakamizwa eziningi zokunciphisa ukwakheka kwe-cholesterol futhi unciphise inani layo egazini, ngakho-ke udinga ukukhetha umuthi nodokotela wakho, futhi ngezikhathi ezithile uthathe izivivinyo ngesikhathi sokwelashwa ukuze ubheke ukusebenza ngempumelelo kwezindlela zokwelashwa.
Ukuze wenze ngokwejwayelekile i-lipid metabolism ne-cholesterol ephansi, kubalulekile ukunamathela ekudleni. Kuhle ukulandela inombolo yokudla eyi-10 noma eyi-14. Yiliphi ithebula elifanelwe kangcono, kufanele ubuze udokotela wakho ngemuva kokuphasa ukuhlolwa.
Noma yikuphi ekudleni okwehlisa i-cholesterol kubandakanya ukungafakwa kokudla okuthosiwe, okunamafutha, okunosawoti, okuhogelwayo futhi okubunjiwe. Ama-sausage, ushizi onamafutha, ama-broths aqinile awafakiwe. Kunconywa ukunciphisa ukusetshenziswa kwamaswidi, isinkwa, inyama enamafutha, inhlanzi nemikhiqizo yobisi enokuqukethwe okunamafutha aphezulu.
Imikhiqizo ewusizo yesibindi:
Imikhiqizo ewusizo futhi eyingozi yesibindi
Amaswidi asanda kufakwa.
Inyama enamafutha amancane nenhlanzi.
Amaqanda (ikakhulukazi amaprotheni).
Imikhiqizo yobisi oluhlaza.
Isibindi siwusizo kakhulu - siqukethe inani elikhulu lezinto eziwusizo emzimbeni. Kungcono ukudla isibindi senkukhu, i-turkey noma unogwaja - uqukethe kusuka ku-40 kuye ku-60 mg we-cholesterol. Esibindi senkomo - kuze kufike ku-100 mg, nasengululeni - kuze kufike ku-300 mg we-cholesterol, ngakho-ke kudingeka ukuthi angabandakanywa ekudleni kuze kufinyelele ezingeni le-lipids emzimbeni.
Isibindi sezinhlanzi siqukethe ne-cholesterol eningi kakhulu: esibindini se-cod cishe singama-250 mg, futhi esibindini se-burbot - ngaphezu kwe-600 mg. Ngakho-ke, isibindi senhlanzi asifakwa ngokuphelele ekudleni, futhi iziguli ziyelulekwa ukuthi zisebenzise i-salmon, i-salmon, i-halibut, ne-sardines.
Ukunciphisa i-cholesterol ephezulu, ungasebenzisa umuthi wendabuko. I-Tubage ibhekwa njengendlela ephumelela kunazo zonke yokuhlanza isibindi. Le ndlela ikuvumela ukuthi ususe ubuthi nezinto ezinobuthi esibindini, uhlanze izindunduma ze-bile ekuqongeleleni kwe-bilirubin ne-cholesterol, futhi kuvikele ukwakheka kwamatshe e-cholesterol.
Ukuze ufeze inqubo, udinga ukuncibilikisa i-spoonful of magnesia noma i-sorbitol engilazini yamanzi afudumele amaminerali ngaphandle kwegesi bese uphuza nekhambi. Ngemuva kwalokho udinga ukuqamba amanga ngakwesokunene sakho, faka i-pad yokushisa endaweni yesibindi bese ulala amahora angama-2. Uma kukhona izinhlungu noma izinhlungu, khona-ke udinga ukuyeka inqubo bese uphuza i-No-shpa noma i-Papaverine tablet.
Ukuhlanzwa kwesibindi ngeke kusebenze uma ungalandeli imithetho efanelekile yokudla bese uqhubeka nokuphuza utshwala. Ukuze uthuthukise umphumela wokulahlwa kwempahla, kunconywa ukusebenzisa imikhiqizo esiza ukugeza igazi nemithambo yegazi.
Amakhambi okwelapha okwesibindi angakwazi ukwengeza i-lipid metabolism cishe ngaphandle kwezindleko zezezimali. Yini okusizwa amakhambi:
Kungcono ukupheka i-decoction yamakhambi angama-3-4 - thatha amanani alinganayo emithi ngayinye, uhlanganise nesipuni seqoqo, uthele ingilazi yamanzi, ugcine imizuzu engama-20 kubhavu wamanzi. Phuza isigamu seglasi kathathu ngosuku.
Engilazini yamanzi, govuza u-90 g kafulawa we-buckwheat, imizuzu engu-10. Phuza i-100 g ngosuku.
Knead 0.5 kg wezithelo ze-hawthorn, uthele u-100 ml wamanzi abilayo abilayo, abeke umlilo kanye nokushisa kube ngama-40 degrees. Ngemuva kokupholisa, fafaza amajikijolo, uphuze umhluzi ophumele kwisipuni ngaphambi kokudla.
Songa ikhanda elihlanjululwe likagalikhi no-ulamula abangu-11 ku-grinder yenyama, uthele amanzi abilayo abilayo (i-700 ml) bese uhambe isikhathi esingangesonto, unikine ngezikhathi ezithile. Umkhiqizo ohlungiwe wokuphuza ama-30 ml izikhathi ezi-3 ngosuku isigamu sehora ngaphambi kokudla.
Amakhambi e-Folk awakwazi nje ukususa i-cholesterol eyeqile futhi athuthukise ukusebenza kwesibindi, kodwa futhi aqinise umzimba wonke. Ukuqonda ukuthi kusebenza kangakanani umuthi okhethiwe, kunconywa ukuthi inyanga ngemuva kokwelashwa, unikele ngegazi kuphrofayili ye-lipid.
Ukuphazamiseka kwe-lipid metabolism esibindini kukhulisa inkambo yezifo ezikhona futhi kuvuse ukuthuthukiswa kwe-pathologies entsha. Izinkinga ezinkulu kakhulu yilezi: isifo sokuqina kwemithambo yegazi, isifo senhliziyo, i-hepatosis enamafutha, i-cirrhosis kanye nomdlavuza wesibindi. Abantu abakhuluphele nabadala badinga ukubheka njalo amazinga abo we-cholesterol yegazi futhi bathathe izindlela zokuzivikela ukuze zikhuphuke.
Ngokwemvelo yayo yamakhemikhali, i-cholesterol ngotshwala obukwazi ukuhlanganisa namafutha acid. Itholakala esitokisini sazo zonke izinto eziphilayo. Ukukhiqizwa kwe-cholesterol esibindini kwenzeka ngezigigaba eziningana eziyinkimbinkimbi zamakhemikhali. Ebantwini, izakhi zalamaketanga womzimba ahlukile kulezo zezinye izinhlobo zezinto eziphilayo. I-cholesterol eyenziwe yahlanganiswa ne-bile acid kuma-intrahepatic ducts. Isisindo esiholelwayo singena esiteshini esijwayelekile. Lapha i-bile evela ebhandeni lenyongo ingezwa kukho. Ngokubambisana, angena nge-duodenal Vater papilla enkulu kwi-duodenum. Lapha, umkhiqizo we-cholesterol ku-bile usiza ukugaya ukudla.
I-cholesterol yahlanganiswa kanjani?
Ama-enzymes weHMG-CoA anciphisa ukukhiqizwa kwawo. Imithi okuhloswe ngayo ukwehlisa ukuqoqwa kwalesi sakhi kuhloswe ukwehlisa i-cholesterol yegazi. Ukuvela kwama-cholesterol molecule kwenzeka ngezigaba eziningana:
Ukudliwa kweviniga i-acetate nezinye izinto ezidingekayo ukuze kuhlanganiswe okunye kusuka egazini.
Ukuthola i-mevalonate. Amafomu we-crystal asobala, akhanyayo kalula emanzini. Amaseli we-Hepatic akhiqiza usawoti kanye nama-esters acid.
I-synthesis ye-isopentenyl pyrophosphate. Amamolekyuli aqhamuka ngokusebenzisa i-phosphorylation.
Ukwakhiwa kwe-squalene. Amamolekyuli e-isopentenyl pyrophosphate ahlanganiswe izingcezu ezi-6. Umuthi ufana ne-carotene pigment esakhiweni samakhemikhali futhi uqukethe izinsalela ezingama-30 zekhabhoni.
Ukwakheka kwe-lanosterol. Kukhiqizwa ngokususa amanzi e-squalene. Kungumkhiqizo ophakathi nendawo we-cholesterol synthesis.
Ingqikithi yamangqamuzana cholesterol. Kutholakala kusukela kunsalela ye-lanosterol ngaphansi kwethonya lama-enzyme namandla.
Okunamathiselwe kwama-molecule e-cholesterol kuma-bile acid. Kwakhiwa uBile, ongena duodenum ukugaya ukudla.
Spread emzimbeni wonke
Ukusuka esibindini, i-cholesterol ingena emigudwini ye-intrahepatic ducts. Lapho, ihlangana nama-acid acids ayisebenzisa. Ukufaka ama-ducts we-extrahepatic, izinhlanganisela eziphumayo zengezwa ku-bile egcinwe gallbladder. Imisa ngokusebenzisa i-papilla ye-duodenum ingena emathunjini ukuze ibambe iqhaza ekugayweni kokudla. Engasetshenziswanga izidingo ze-cholesterol yokugaya ukudla ingena egazini. Lokhu kwenzeka ngosizo lwe-lipoproteins. I-cholesterol compounds yathuthwa kuzo zonke izitho nezinhlelo. Bafike ngokudla, bamunca amathumbu, bangena emithanjeni ye-lymphatic, futhi ukusuka lapho bayangena emithanjeni. Lapha, amakhompiyutha e-cholesterol aqhekeka phansi yi-hydrolysis kuya kuma-acid acid athutha izicubu zomzimba nezicubu ze-adipose.
Ama-molecule we-cholesterol ku-bile abandakanyeka ekugayeni kwezakhi zokudla. Kepha lokhu akuwona umsebenzi wabo kuphela. I-cholesterol iqinisa ulwelwesi lweseli ngenxa yesendlalelo esiphindwe kabili sama-phospholipids. Kuqinisa izindonga zeseli, ikwenze kube lukhuni ngokwengeziwe. I-cholesterol iyadingeka ekuhlanganiseni kwe-calcium-calcium encibil calcolol. Kubandakanyeka futhi ekukhiqizweni kwama-glucocorticosteroids yi-adrenal glands nama-hormone e-sexid ocansi yi-gonadal gland yabantu. Ama-molecule we-cholesterol aqinisa udonga lwamangqamuzana abomvu egazi, awavikele ezingcupheni ze-hemolytic. Basebenza njenge-conveyor yezinhlaka zamakhemikhali ezincane. I-cholesterol ifakiwe ekwakhiweni kwe-moleopule ye-lipoprotein yamazinga ahlukene obukhulu. Lezi zokugcina zidlala indima ebalulekile ku-atherogeneis. I-cholesterol engalungile ama-lipoproteins aphansi (i-LDL) nobuncane obuphansi kakhulu (VLDL). Uma ziningi zazo, kunengozi ye-arteriosulinotic plaque emikhunjini.
Izinga eliphakeme le-lipoproteins (HDL) liphikisana nezinye izingxenyana. Ukugxilisa kwabo okukhulu egazini kunomphumela we-prophylactic ekushintsheni kwe-atherosulinotic.
Ngabe i-cholesterol isuswe kanjani?
Uma umuntu edla ukudla okunamafutha amaningi, isibonakaliso mayelana nalokhu singena emangqamuzaneni lapho kukhiqizwa khona i-cholesterol. Ngomgomo wokuphendula, imikhiqizo yawo ivinjelwe. Uma kunokuningi okukhona (okuvela ngaphandle) noma i-endo native (kukhiqizwa umzimba) cholesterol, kunesidingo sokusetshenziswa kwayo. Kulokhu, kunobudlelwano phakathi kwama-molecule e-cholesterol ne-chylomicron complexes ethwala enye ingxenye evela emzimbeni. Ukuqedwa kwayo kusheshiswa ngokusebenza njalo komzimba, ukwenqaba imikhuba emibi, ukondleka okufanele nokuqukethwe okuphezulu kwamavithamini namaminerali abalulekile. Indima enkulu kulezi zinqubo ingeye-microflora yamathumbu. Amagciwane azuzayo ahlahlela ama-molecule e-cholesterol abe yizakhi ezilula okulula ukuwasusa emzimbeni. Ezidakamizweni zithuthukisa ukususwa kwama-statins ne-nicotinamide ye-vithamini.
Imisebenzi esemqoka ye-cholesterol
Ngaphezu kweqiniso lokuthi liyisakhi esisemqoka (fluidity stabilizer) se-cytoplasmic membrane, enikeza ukuqina kwesendlalelo sayo esiphindwe kabili ngenxa yokubekeka okuningana kwamangqamuzana we-phospholipid, i-cholesterol iziveza njengesici-somlawuli wokuvuma kokuqanjwa kwamaseli weseli, kuvimbele i-hem hemrate ye-hemorrume. .
Futhi kusebenza njengento yokuqala yokwenziwa kwamakhompiyutha eqembu le-steroid:
Amavithamini e-D-group (ergocalciferorol ne-cholecalciferol).
Njengoba kunikezwe ukubaluleka komzimba weqembu ngalinye lalezinto, kuba sobala ukulimala kokudla okungenayo i-cholesterol noma ukwehla okwenziwe ngamazinga entweni yaleli gazi.
Ngenxa yokuntuleka kwayo emanzini, le nto ingahanjiswa ngegazi kuphela ngokuhambisana namaprotheni ama-transporter (ama-apolipoproteins), lapho kuhlanganiswa nokwakhelwa khona izakhi eziyinkimbinkimbi ze-lipoprotein.
Ngenxa yokuba khona kwama-apolipoproteins amaningi ahlukene (nomehluko kwesisindo samangqamuzana, izinga lawo lokushiswa kwe-cholesterol, futhi futhi ngenxa yekhono lenkimbinkimbi ukuncibilika egazini, kanye nezindawo eziphikisayo zamakristali e-cholesterol ukwakha ama-atherosranceotic plaques), izigaba ze-lipoproteins ziyahlukaniswa:
ukushuba okuphezulu (i-HDL, noma isisindo esikhulu samangqamuzana, noma i-HDL-lipoproteins),
ukungazweli okuphansi (i-LDL, noma isisindo esincane se-molecule, noma i-LDL-lipoproteins),
kwabantu abaphansi kakhulu (i-VLDL, isisindo esisezingeni eliphansi kakhulu, noma isigaba se-VLDL sama-lipoprotein),
Ezithanjeni zomngcelezi, i-cholesterol ingena iboshelwe kuma-chylomicrons, i-LDL noma i-VLDL, esibindini (ngokususwa kamuva komzimba) - ngokuhambisa ama-apolipoproteins esigabeni se-HDL.
Ukuze noma yiziphi izingqimba ze-atherosulinotic zenze kusuka ku-cholesterol (eba yizo zombili “iziqaqa” odongeni olonakele lomthambo kanye “nezikhala” zangaphakathi endaweni lapho ngaphandle kwazo ukufinyeleleka kwengqimba yomsipha kufanele kuholele ekubulalekeni kwayo - isayithi liwela), noma ama-hormone, noma eminye imikhiqizo, yona emzimbeni kufanele ihlanganiswe kuqala kwenye yezindawo ezintathu:
Njengoba amaseli wesibindi (i-cytosol yabo kanye ne-endiclopic reticulum ebushelelezi) engabanikezeli abaphambili besakhiwo (ngo-50% noma ngaphezulu), ukwakheka kwento kufanele kubhekwe ngokuqondile ngokombono wokuphendula okwenzeka kuwo.
Ukuvela kwe-cholesterol kwenzeka ngezigaba ezi-5 - ngokwenziwa okulandelanayo:
Uguquko oluningi belungeke lube khona ngaphandle kokubamba iqhaza kwama-enzyme agqugquzela isigaba ngasinye senqubo.
Ividiyo ekwakhekeni kwe-cholesterol:
Ama-enzymes abandakanyeka ekwakhiweni kwento
Esigabeni sokuqala (okubandakanya imisebenzi emithathu), ukudalwa kwe-acetoacetyl-CoA (lapha iCoA - coenzyme A) kuqalwa yi-acetyl-CoA-acetyltrasferase (thiolase) ngokuhlanganiswa kwama-molecule ama-2 acetyl-CoA. Ngaphezu kwalokho, ngokubamba iqhaza kwe-HMG-CoA synthase (i-hydroxymethyl-glutaryl-CoA synthase), okuvela e-acetoacetyl-CoA nelinye i-molecule le-acetyl-CoA ꞵ-hydroxy-ꞵ-methylglutaryl-CoA kungenzeka.
Lapho kuncishiswa i-HMG (ꞵ-hydroxy-ꞵ-methyl-glutaryl-CoA) ngokuqothuka kwesicucwana se-HS-CoA ngokubamba iqhaza kwe-NADP-hydroxymethyl-glutaryl-CoA reductase (HMG-CoA reductase), umkhiqizo wokuqala ophakathi nendawo, i-cholesterol preursor. )
Esigabeni sokuhlanganiswa kwe-isopentinyl pyrophosphate, imisebenzi emine yenziwa. Ngokusebenzisa i-mevalonate kinase (bese-phosphomevalonate kinase), iMevalonate 1 no-2 iguqulwa iphinda iphosphorylation ibe ngu-5-phosphomevalonate, bese iya ku-5-pyrophosphomevalonate, eba yizi-3-phospho-5-pyrophosphomevalonate ngezigaba ezi-3 ku-phosphorylate. (ngokubamba iqhaza kwe-kinase enzyme).
Umsebenzi wokugcina yi-decarboxylation kanye ne-dephosphorylation ngokwenziwa kwe-isopentinyl pyrophosphate (eyaqalwa ukubamba iqhaza kwe-enzyme pyrophosphomevalonate decarboxylase).
Ekuhlelweni kwe-squalene, isomerization yokuqala ye-isopentenyl pyrophosphate kuya ku-dimethylallyl pyrophosphate iyenzeka (ngaphansi kwethonya le-isopentyl phosphatisomerase), bese isopentenyl pyrophosphate defence nge-dimethylallyl pyrophosphate (isibopho sobuchwepheshe senziwa phakathi kwe-C.5 okokuqala no-C5 into yesibili) ngokwakhiwa kwe-geranyl pyrophosphate (kanye ne-cleavage ye-molecule ye-pyrophosphate).
Esinyathelweni esilandelayo, kwakhiwa isibopho phakathi kukaC5 isopentenyl pyrophosphate ne-C10 i-geranyl pyrophosphate - njengomphumela wokuncibilikisa owokuqala nowesibili, kwakhiwa i-farnesyl pyrophosphate bese kuthi kuqhamuke i-mocule ye-pyrophosphate elandelayo ku-C.15.
Lesi sigaba siphela ngokubuyiselwa kwama-molecule amabili e-farnesyl pyrophosphate ku-C C15- C15 (ekhanda-kuya-ekhanda) ngokususwa kwama-molecule ama-2 e-pyrophosphate ngasikhathi sinye. Ukubuyiselwa kwama-molecule womabili, izifunda zamaqembu e-pyrophosphate asetshenziswa, elinye lawo liqedwa ngokushesha, okuholela ekwakhiweni kwe-pquophosphate exquale. Ngesikhathi sokuncishiswa kwe-NADPH (ngokususwa kwe-pyrophosphate yesibili), le nto ephakathi nendawo (ngaphansi kwethonya le-squalene synthase) iphenduka isikwati.
Kukhona imisebenzi emi-2 ekwakhiweni kwe-lanosterol: eyokuqala iphetha ngokwakhiwa kwe-squalene epoxide (ngaphansi kwethonya le-squalene epoxidase), okwesibili - ngokujikeleza kwe-squalene epoxide kumkhiqizo wokugcina wesigaba - i-lanosterol. Ukuhambisa iqembu le-methyl kusuka ku-C14 ku-C13, futhi kusuka ku-C8 ku-C14 uyazi i-oxidosqualene-lanosterol cyclase.
Isigaba sokugcina sokuhlanganiswa sihlanganisa ukulandelana kwemisebenzi emi-5. Njengomphumela we-oxidation ye-C14 Iqembu le-methyl le-lanosterol likhiqiza ikhemikhali ebizwa nge-14-desmethylanosterol. Ngemuva kokususwa kwamanye amaqembu amabili e-methyl (ku-C4) into iba yi-zymosterol, futhi ngenxa yokudluliswa kwezibopho ezimbili8= C9 ukubeka uC8= C7 ukwakheka kwe-δ-7,24-cholestadienol kwenzeka (ngaphansi kwesenzo se-isomerase).
Ngemuva kokuhambisa isibopho esiphindwe kabili C7= C8 ukubeka uC5= C6 (ngokwakhiwa kwe-desmosterol) kanye nokubuyiselwa kwezibopho eziphindwe kabili emaketeni aseceleni, kwakhiwa into yokugcina - cholesterol (noma kunalokho, cholesterol). I-enzyme engu- "δ" 24-reductase "iyalela" isigaba sokugcina se-cholesterol synthesis.
Yini ethinta uhlobo lwe-cholesterol?
Ngokunikezwa kokuncipha okuncane kwama-lipoproteins asezingeni eliphansi (i-LDL), ukuthambekela kwabo kokuthola amakristalu we-cholesterol (ngokwakhiwa kwamathafa we-atherosulinosis emithanjeni yemithambo okwandisa amathuba okuba nezinkinga zenhliziyo nemithambo yegazi), ama-lipoprotein alesi sigaba ngokuvamile abizwa ngokuthi “i-cholesterol eyingozi”, ngenkathi ama-lipoprotein aphezulu ane isisindo samangqamuzana (i-HDL) enezakhiwo ezihlukile (ngaphandle kwengozi ye-atherogenicity) ibizwa ngokuthi i-cholesterol "ewusizo."
Ngokubheka ukuhlobana kwalesi siphakamiso (umzimba awukwazi ukuba yilutho olungenamibandela noma oluyingozi yodwa), noma kunjalo, izindlela ezihlongozwayo okwamanje kubantu abanokuphakama okuphezulu kwe-vasology pathology ukulawula nokunciphisa i-LDL emazingeni aphezulu.
Ngesibalo esingaphezulu kuka-4.138 mmol / l, ukukhethwa kokudla kunconyelwa ukunciphisa izinga labo laya ku-3.362 (noma ngaphansi), izinga elingaphezulu kuka-4.914 lisebenza njengesibonakaliso sokunquma ukuthi ukwelashwa kunciphise okwenziwe izidakamizwa ngokwezifiso.
Ukwanda kwengxenyana yegazi "cholesterol embi" kubangelwa yizici:
ukusebenza komzimba ophansi (ukungasebenzi ngokomzimba),
ukudla ngokweqile (ukuncika kokudla), kanye nemiphumela yako - isisindo ngokweqile noma ukukhuluphala,
Ukudla okungalinganiselwe - ngokudla okuphambili kwama-trans, ukudla okugaya kalula (amaswidi, ama-muffin) kulimaza okuqukethwe yi-pectin, i-fiber, amavithamini, izinto zokulandela, ama-acid angama-polyunsaturated.
ukuba khona kokudakwa okujwayelekile kwabasendlini (ukubhema, ukuphuza utshwala ngendlela yeziphuzo ezahlukahlukene, ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa).
Ukuba khona kwe-pathology engalapheki kunomphumela onamandla ngokulinganayo:
ukuphazamiseka kwe-endocrine nge-hyperproduction yama-hormone e-adrenal cortex, ukusweleka kwama-thyroid noma ama-sex sex, noma isifo sikashukela mellitus,
ukungasebenzi kahle kwe-renal ne-hepatic nokukhubazeka kwezigaba ezithile zokuvela kwama-lipoprotein “alusizo” avela kulezi zitho,
Isimo se-cholesterol metabolism ngqo sincike kwisimo se-microflora yamathumbu, esiza nge (noma esivimbela) ukumuncwa kwamafutha okudla, futhi futhi sibambe iqhaza ekwakhiweni, ekuguqukeni, noma ekubhujisweni kwama-sterols emvelaphi yakudala noma ye-endo native.
Futhi okuphambene nalokho, ukunciphisa inkomba yokuhola "okubi" cholesterol:
imfundo yomzimba, imidlalo, ukudansa,
ukugcina impilo enempilo ngaphandle kokubhema notshwala,
ukudla okulungile ngaphandle kwe-carbohydrate elula yokugaya kalula, enokuqukethwe okuphansi kwamafutha ezilwane kwento efakwayo - kepha kunokuqukethwe okwanele kwefayibha, i-polyunsaturated fatty acids, izinto ze-lipotropic (lecithin, methionine, choline), ukulandelela izinto, amavithamini.
Ividiyo evela kusazi:
Inqubo isemzimbeni kanjani?
Cishe ama-20% we-cholesterol angena emzimbeni ngokudla akudlayo - akhiqiza ama-80% asele odwa; ngaphezu kwesibindi, inqubo yokuqalwa yenziwa yi-reticulum ebushelelezi ye-endoplasmic yamaseli:
Ngokungezelela emgomeni weklasikhi wokudala i-cholesterol molecule echazwe ngenhla, kuyenzeka futhi ukuyakha usebenzisa indlela engeyona eyemvelo. Ngakho-ke, enye yezinketho ukwakheka kwento ephuma kushukela (okwenzeka kwamanye ama-enzymes nangaphansi kwezinye izimo zesitho somzimba).
Synthesis of Isopentenyl Pyrophosphate
Ukuvela kwe-mevalonate kuyaqhubeka ngezigaba ezintathu.
Ukwenziwa kwe-acetoacetyl-CoA kusuka kuma-molecule amabili e-acetyl-CoA usebenzisa i-thiolase enzyme acetoacetyl transferase. Ukusabela kuguqukele emuva. Iba khona ku-cytosol.
Ukwakhiwa kwe-β-hydroxy-β-methylglutaryl-CoA kusuka ku-acetoacetyl-CoA nge-molecule yesithathu ye-acetyl-CoA isebenzisa i-hydroxymethylglutaryl-CoA synthase (HMG-CoA synthase). Ukusabela kubuye kuguqulwe. Iba khona ku-cytosol.
Ukwakheka kwe-Mevalonate ngokuncipha kwe-HMG nokuqothula kwe-HS-KoA kusetshenziswa kabusha kwe-NADP-hydroxymethylglutaryl-CoA reductase (HMG-CoA reductase). Iba khona ku-GEPR. Lokhu kusabela kokuqala okungenakuphikwa ku-cholesterol biosynthesis chain, futhi futhi kunciphisa izinga le-cholesterol biosynthesis. Ukushintshashintshashintsha kwezimpawu zokushintshana kwezimpawu ekuhlelweni kwalesi enzyme kwaphawulwa. Umsebenzi wayo ukhuphuka ngokwethulwa kwama-hormone e-insulin nama-thyroid, ancipha ngendlala, ukwethulwa kwe-glucagon, glucocorticoids.
Kukhona ezinye izindlela zokwakha i-mevalonate.
Ukuhlanganiswa kwe-isopentenyl pyrophosphate edit |